> Resource > Video > fududahay in la isticmaalo Video ayeey Software la Nice Features
Raba barnaamij ay fududahay in la saxaa filimada gurigaaga? Waxaad aadan keligaa. Qof kasta waa mashquul oo ma haystaan ​​waqti ku filan si ay u ogaado sida loo edit videos. Aragtidayda, an tafatirka software video haboon waa in si sahlan qof walba si aad u bilowdo. Waxa ay noqon kartaa video tafatirka fudud software, laakiin ugu yaraan waxaa ku jira oo dhan muuqaalada aasaasiga ah ee aad rabto. My talo waa Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) , taas oo dhimeysa geynta iyo awood ugu wanaagsanayd. Waxa kaliya ma ahan yimaado oo dhan qalab caadi video tafatirka ee farahaaga, laakiin sidoo kale waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay inaad keento videos heerka ku xiga.
Hadda hubi waxa ay fududahay in la isticmaalo tafatirka software video kuu sameyn karo. Haddii aad socda Mac ah, oo kaliya la qaato Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ee Mac si isku mid ah loo gaaro.
Easy Video ayeey Software la interface ogaado
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa software ah video fudud tafatirka Timid interface ogaado. Waxaan loogu talagalay fudud software video tafatirka u isticmaala guriga, ma xirfadlayaasha. Marka aad aragto naga interface hoose ugu weyn, waxaad isla markiiba ogaanaysaa sida loo isticmaalo. Riix iyo jiididda iyo dhibic. Jadwalka ku salaysan video tafatirka ka dhigaysa hawlaha oo dhan fudud. Waxaad ka heli doontaa wax kasta oo Timeline.Check bogga hagaha, fadlan riix halkan .
Simple Video ayeey - jiid iyo rid Fikradaha Your
Iyada oo ay taasi fududahay software video tafatirka, wax walba waa uu watay. Waxaad si fudud u soo jiidi kartaa jeedi content in si degdeg ah wax ka bedel. Si aad ku dari video / audio / sawirka, jiididda iyo hoos u Timeline ah. Si aad ku dari kala guurka, jiididda iyo hoos u kala guurka ah si ay u video / sawirka. Si aad ku dari horyaalka, jiididda iyo hoos u template horyaalka inay booska aad rabto in ay muujiyaan ilaa a. Si aad u dooratid ka 300+ saamaynta video, jiididda iyo hoos si video ama sawir aad rabto in aad dalbato in saamaynta. Plus, aad rabto in aad wax kasta si, uun ka heli qalab saxda ah ee aad gacanta, oo ay ku jirto jaritaanka, lana siii, qoqobada, tafatir audio (track video, voiceover iyo music soo jeeda), iwm
Easy Video ayeey Software, Unlimited Video Sharing
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waddada u xaarayaa in qoyska iyo saaxiibada wadaagaan videos goobtii, wax kasta waa on YouTube, computer, Qalabka telefoonada gacanta ama TV, waxaad dooran doonaa jidka aad. Waxaad si toos ah video in YouTube, iyo sidoo kale fariin u diraya optional in Facebook iyo Twitter gali kartaa. Horena profiles ka mid yihiin in ay wax soo saarka videos for ciyaaro on Qalabka telefoonada gacanta sida iPhone, iPad, iPod, PSP, iwm No diinta dheeraad ah loo baahan yahay. A DVD qalab lagu dhisayo in kuu ogolaanayaa inaad si ay u gubaan video inay DVD tayo sare leh u daawanayay TV-ga aad DVD guriga ciyaaryahanka.
Download version maxkamad free of Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) (version Mac / Windows) hoos ku qoran, bilaabaan in ay ka dhigto filimada guriga cajiib ah ayaa maanta!